Iza moa i Nikodemosy - Fiangonan'Andriamanitra Soisa manerantany
lahatsoratra > Miresaka momba ny fiainana > Iza moa i Nikodemosy?
Nanintona ny sain'ireo olona manan-danja maro i Jesosy nandritra ny fiainany teto an-tany. Anisan'ireny olona tena tadidiko io i Nikodemosy. Izy dia mpikambana tao amin'ny Filankevitra Ambony, vondrona vondrona manam-pahaizana izay nitombo an'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana tamin'ny fandraisana anjaran'ny Romana. Nikodemosy nanana fifandraisana samy hafa be amin'ny Mpamonjintsika - fifandraisana iray nanova azy tanteraka. Tamin'izy vao nihaona tamin'i Jesosy dia nanizingizina izy fa tokony amin'ny alina. Nahoana? Satria mety ho very izy raha toa ka nahita lehilahy iray nanohitra azy ireo ny fampianarany. Menatra izy raha sendra niaraka taminy.
Toa an’i Nikodemosy, dia maro amintsika no tsy nitoky afa-tsy ny tenantsika mba hahasambatra ara-panahy. Indrisy anefa, araka ny nahafantaran’i Nikodemosy, dia tsy dia nahomby loatra tamin’izany isika. Amin’ny maha-vahoaka lavo antsika dia tsy manana fahafahana hamonjy ny tenantsika isika. Misy fanantenana anefa. Nohazavain’i Jesosy taminy hoe: “Andriamanitra tsy naniraka ny Zanany ho amin’izao tontolo izao hitsara izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Izay mino Azy dia tsy hohelohina » (Jao 3,17- iray).
Taorian’ny nahafantaran’i Nikodemosy manokana ny Zanak’Andriamanitra sy natoky Azy mba hahazoany ny fiainana mandrakizay, dia fantany koa fa mijoro tsy misy pentina sy madio eo anatrehan’Andriamanitra miaraka amin’i Kristy izy ankehitriny. Tsy nisy nahamenatra. Nianarany izay nambaran’i Jesosy taminy: “Fa izay manao ny marina kosa dia manatona ny mazava, mba haseho fa ny asany dia atao amin’Andriamanitra.” (Jaona. 3,21).